Kalandarkaarku waa qalab viasz ku ool ah oo bixiya macluumaadka bulshada, iskuduwidda hawlaha kooxeed, qof kasta oo dalok wargeliyo dhacdooyinka. Waxay ka mid yihiin barnaamijyada ugu badan ee loo isticmaalo dhammaan qalabka.
Waxaad ku dari kartaa jadwalka mocsár kasta oo ka boggaaga közepén. Waxaad gali kartaa jadwalkaas dhacdooyinka muhiimka ah ee aad rabto in aad la socotid – ciyaaraha kubadda cagta, maalmaha dhalashada, shirarka macaamiisha, waqtiyada loo qabtay soo gudbinta mashaariicda. Haddii jadwalka lala wadaago koox ama bulsho, waxaad ku cusbooneysiin kartaa dhacdooyinka xiisaha u leh kooxda ama bulshada – iibinta geerashka, xaflad xafiis, u jeedin xubin kooxeed cusub iyo dhacooy. Jadwalku wuxuu kaa caawinayaa inaad sii wadatid xubnaha beesha ama akhristayaashaada feejignaanta ah ina ka warqabaan dhacdooyinka soo socda.
Mid ka mid ah habka dalok dalan kalandarka waa isticmaalka plugins. Habkani wuxuu kaloo kaa caawin doonaa inaad u habeysid muuqaalka jadwalka ilaa xad. Hab káposzta oo dagu dado jadwalku waa adoo do dari jadwalka Google ee internet boggaaga inaad in cadu booneysiiso dhacdooyinkaaga. A Maadaama inta badan isticmaalayaasha internet a Google Naptár oya yaqaanaan felületén, waxaan u qaadan doonaa habkan ujeedadayada.
2 Ku darista Code Codsigaaga A WordPress WordPress
3 Ingyenes Google Naptár
1. Waxa ugu horreeya ee same sameo waa in the isku készíti a Google Naptár naptárát. Waxaad samayn kartaa tan adiga adoo gali kartid jadwalka Google ee shabakadaada. Waa inaad heshaa shaashad sida kan hoose.
2. Marka xigta, hel jadwalka bulshada. Ka hel liitet hoos udhaca ah ee ku yaal ‘jadwalka kale’ ‘ka dibna ka dooro Kalandarrada xiisaha leh ee bogga.
Liis kalandarrada xiisaha leh ayaa shaashadaada ka soo muuqan doona. Xullo középkapos oo kalandar ah oo xiisa leh adiga oo u qora. Xanaaq, a waxaan a „ciidaha oromada” doortay. Waad arki kartaa jadwalka taariikhda kahor intaanad qorin. Waadna soo qaadan kartaa intaad jeceshahay dhammaantoodna waxay ku dhegan yihiin jadwalkaaga. Laakiin tababarkan, aan ku bilowno mid.
3. Ka dib markii aad dooratid jadwalka taariikhda lagu dhejiyo, dhagsii Xusuus-qorka loo yaqaan „Vissza a naptárba” ee shaashadda sare. Waxaad arki doontaa jadwalkaaga oo leh jadwalka ‘Fasaxyada ortodox’ ee ku lifaaqan.
Ku darista Code Codsigaaga A WordPress WordPress
Hadda waxaan u wareegeynaa marxaladda labaad ee ficilka uu u rogo boggaaga WordPress. Waa inaad gelisaa jadwalka boggaaga. Haddii aad horey u leedahay Google Naptár taariikhda iyo waqtiyada, qaabka ugu fudud ee lala wadaagi karo xubnaha kooxda waa in aad ku soo gashid boggaaga.
1. Tani, prémes kövér kölyök ka WordPress WordPress aad. Riix az Edit iyo dooran qaybta qoraalka ee bogga szerkesztésén.
Hadda, ha noqo jadwalkaaga guji kuna dhaji naptárbeállításai dhinaca bidixda.
Sidoo kelkáposzta és újabb jiro ikhtiyaar van habeynayaan jadwalka. Waxaad riixi kartaa oo waxaad dooran kartaa goobaha aad jeceshahay. Xulashada habeynta ayaa ah közép aasaasi ah mana aha mid guud ahaanba sida kuwa ay ku bixiyaan plugins ama ilaa inta laga rabo website-yo waaweyn.
3. Mentse az oldalt adoo gujinaya Keydinta, Cusbooneysiinta ama Daabacaadda. Muujinta mawduucaaga waa viasz jawaab ah, viasz walba waa inay shaqeeyaan.
Waxaad ku dari kartaa koodh isku mid ah qoraalka qoraalka ah ee bogag kala duwan iyo goobaha widget-ku ku xiran yahay mawduucaaga.
Ingyenes Google Naptár
Hab kale oo dalok dablaylayo jadwalkaaga waa inaad soo dejiso plugins oo aad isticmaasho si is u habeeyaan jadwalkaaga. A Munaasabadaha Google Naptár közepén ah közepén ah plugin ah. Qalabkani waa mid viasz ku ool ah, waxaadna u arki kartaa dhacdooyinka qaabka bil walba ama qaabka liiska, xitaa laga bilaabo qalabkaaga mobile. Jadwalada isku dhafan waxaa dal dari karaa hal fűrész. Bandhigga munaasabadaha munaasabadda waxaa lagu dhejin karaa calaamado sahlan iyo iyada oo aan la isticmaalin koodhka.
Qaybta lacagta caymiska ee Google ayaa sidoo káposztaterápia. Noocani wuxuu isticmaalaa isku xirnaan sugan oo u dhexeeya Google iyo website-kaaga. Noocyo muuqaal ah oo badan ayaa loo isticmaali karaa lagu daro lifaaqyada, macluumaadka martida ama urur dhacdo. Cusbooneysiinta waa közepén toos ah.
Aad haysato jadwal taariikheed oo ku yaal shabakadaada waa habka ugu fudud uguna dhaqsaha badan si aad uhesho xubnaha kooxda ama bulshada ku wargeliya dhacdooyinka muhiimka ah ama soo socda. Waxay kaa caawineysaa inaad maareyso dhacdooyinka hal meel. Isku nap oo arag naftaada Sida jadwalka ku-meel-gaarka ah ay u sahlanaato viasz-qabad ahaan adoo isku dayaya dhammaan dhacdooyinkaaga hal shaashad.